Hal-abuurnimada madax-bannaanidu waa qiimaha ugu muhiimsan ee Meishuo.
Sii adduunka walxo xumbo fudud oo raaxo leh;
Sii macaamiisha alaab la aamini karo iyo adeegyo qiimo leh, oo la-hawlgalayaasha u keena fursado horumarineed oo dheeraad ah;
Shaqaaluhu mar walba waa hantidayada ugu weyn; iyada oo loo marayo tignoolajiyada iyo alaabooyinka tayada sare leh, siinta macaamiisha adeegga ugu tayada wanaagsan waa daba-galkayaga joogtada ah.
Waxay ku taallaa dhulka fara badan, Huzhou Meishuo Qalabka Cusub ee Co., Ltd. waxaa la aasaasay iyada oo leh hadafkeeda dhabta ah!
Meishuo had iyo jeer waxay u hoggaansamaan fikradda sayniska iyo ilaalinta deegaanka. Waxaan ku dhaqnaa fikradda ah horumarinta waarta cagaaran oo si firfircoon uga jawaabaan siyaasadda qaranka aasaasiga ah ee badbaadinta tamarta iyo dhimista qiiqa,
Waxaan bixinaa wax qabad sare iyo qalab gudaha ah oo fudud oo loogu talagalay warshadaha baabuurta; Qalab heersare ah oo heerkulbeeg ah oo cagaaran oo heer sare ah oo loogu talagalay warshadaha dhismaha; Qalabka dahaarka kulaylka raagaya ee qaboojiyaha iyo warshadaha kuleylka sagxada; waxqabadka xasiloon iyo agab ESD shaqaynaya oo la habeeyey iyo badeecadaha elektiroonigga ah iyo warshadaha isgaarsiinta.
ESD xumbo anti-static
Waxaan haynaa shahaadooyin farsamo xirfadeed, shaybaaro taageeraya, kooxaha R&D iyo saldhigyada.
Meishuo waxaa ka go'an horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta alaabta xumbo polyolefin. Iyada oo ku saleysan walxaha xumbo polyetylen fudud ee jira (IXPE & XPE), waxaan ku maalgelineynaa cilmi-baarista gaarka ah iyo horumarinta wax-qabadka sare ee xumbo polypropylene (IXPP).
Dhammaan shaqaalaha Meishuo waxay u hoggaansamaan qiimaha bixinta alaab tayo sare leh iyo u adeegida dadka adduunka oo dhan.
Goobaha la qabsaday